Lahatsoratra nosoratan'i Sesie Bonsi
Sesie dia mpisolovava manana fahaiza-manao sy fahalalana ambony amin'ny sehatry ny teknolojia finday sy ny fotodrafitrasa ao anatin'izany fa tsy voafetra amin'ny lalànan'ny fifandraisan-davitra manerantany, ny rafitra fandoavam-bola amin'ny finday sy ny fitsipika ara-bola, ny m-varotra ary ny lalàna ara-barotra sosialy. Mpilalao ekipa mavitrika sy mazoto manana fahaiza-manao famakafakana raharaham-barotra ambony ary fahaizana mamakafaka sy manatsara ny fizotran'ny fandraharahana amin'ny teknolojia finday. Mitana patanty roa amin'ny teknolojia fandoavam-bola. Visa Technology Partner, ary FIS Fintech Accelerator Cohort 1 mpanorina. Matihanina mahomby sy mazoto manana fiaviana samihafa amin'ny fandraharahana, fandraharahana, lalàna ary rafi-pandaminana.
Ny fomba fanokafana ny sisintany vaovao ny fandoavam-bola Bluetooth
Zoma, Desambra 3, 2021 Alakamisy, Desambra 2, 2021 Sesie Bonsi
Saika matahotra ny hisintona fampiharana hafa ny rehetra rehefa misakafo hariva any amin'ny trano fisakafoanana iray. Satria ny Covid-19 dia nanosika ny filàna famandrihana sy fandoavam-bola tsy misy fifandraisana, nanjary soritr'aretina faharoa ny harerahana amin'ny fampiharana. Ny teknolojia Bluetooth dia natao hanamafisana ireo fifampiraharahana ara-bola ireo amin'ny alàlan'ny famelana ny fandoavam-bola tsy misy fikasihana amin'ny lavitr'ezaka, amin'ny fampiasana fampiharana efa misy hanaovana izany. Ny fandinihana vao haingana iray dia nanazava ny fomba nanafaingan'ny valan'aretina ny fampiasana ny teknolojia fandoavam-bola nomerika. 4 amin'ny mpanjifa amerikana 10 no manana